विश्वविद्यालयमा तोडफोड विद्यार्थी पक्राउ ।
२०७८ फाल्गुन १८, बुधबार १८:५५
न्युजडेस्क/जनकपुरधाम, फाल्गुन १८ गते
मधेस प्रदेश जनकपुरधामको राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा समयमा परीक्षा सञ्चालन नगरेको विरोधमा आक्रोशित विद्यार्थीहरुले राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेका छन् । तोडफोडमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा आन्दोलित अन्य विद्यार्थीहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि पुगेर प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरु प्रहरी कार्यालयको मुख्यद्धार अगाडी धर्ना बसेका हुन् । विद्यार्थीलाई ठाम्न मिल्दैन, अविलम्ब परीक्षा सञ्चालन गर, पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई रिहा गर जस्ता नाराबाजी उनीहरुले गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयमा तोडफोड गरेपछि चारजना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले आन्दोलन रोकिएको छ । विद्यार्थी र क्याम्पसका प्रशासनका पदाधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ ।
क्याम्पसको लापरबाहीका कारण समयमा परीक्षा नभएको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । एक विद्यार्थीका अनुसार क्याम्पसले फागुन १८ देखि २३ गतेसम्म परीक्षा लिने सूचना निकालेको थियो । तर इन्टर्नल एसेस्मेन्ट मार्क नभएका कारण परीक्षा स्थगित भएको छ ।
समयमा इन्टर्नल एसेस्मेन्ट मार्क नपठाएर क्याम्पसले चरम लापरबाही गरेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ । क्याम्पस प्रशासनको लापरबाहीले विद्यार्थी समस्यामा परेको बताइएको छ । पटक पटक आन्दोलनका कारण राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बदनाम भइरहेको छ ।
पक्राउ पर्ने विद्यार्थीहरु आदर्श मण्डल, निराजन सिंह, सन्तोष यादव र सोनु साह रहेको समाजवादी विद्यार्थी युनियन धनुषाका सरोज कुमार यादवले जानकारी दिएका छन् ।
मधेस प्रदेश घोषणा अध्यक्ष यादवले भए भावुक
सिके राउतले अराजक गतिविधि गरेको भन्दै महिला संघको प्रदर्शन ।
कृषि विश्वविद्यालयको समुदघाटन, प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष
प्रदेश-२ का प्रदेश प्रमुखको पत्नीलाई पाँच लाख दिइयो ।
पौैराणिक लक्ष्मीसागरमा महाआरति प्रारम्भ ( फोटो फिचर )
निजगढ विमानस्थल सारेमा आफुलाई स्वीकार्य नहुने: मुख्यमन्त्री राउत
मधेस प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोड बजेट प्रस्तुत भौतिक, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता
पार्टी फुटाउने सांसदहरुलाई मोसो दल्ने चेतावनी
औरही गाउँपालिकाका अध्यक्षले सार्बजनिक कार्यक्रममै शिक्षिकामाथी दुर्व्यवहार गरे
अध्यक्ष यादवविरुद्ध डा. भट्टराई हस्ताक्षर संकलन गर्दै।
कात्तिक २७ संघ र मंसिर १३ प्रदेशमा चुनाव हुने।
कमला एक महिलालाई हातखुट्टा बाँधेर बलात्कार गरे।
कार्यालय :- जनकपुरधाम, प्रदेश नम्बर-२
सम्पर्क :- [email protected]
वेबसाईट :- www.magahitoday.com
सूचना बिभाग :- Coming Soon
मगही मिडिया प्रा. लिद्वारा संचालित
संचालक/सम्पादक :- दिपेन्द्र कुमार कापर
न्युजडेस्क :- बलिराम कापरी
सिरहा :- महेश सिंह